Bluetooth be voninahitra Self ny mampifandanja ny Scooters - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Na dia, iray amin'ireo fomba tena tsara dia ny hividy iray tena sy araka ny tokony ho-malaza mpivarotra mba hanafoana ny fanantenana misy tranga toy izany. Izany dia tsy ho very ny fomba ary tsy mila miahiahy be dia be ny mba amin'ny oncoming fifamoivoizana. Ny 2 Wheel ny mampifandanja ny Scoote R avy Powerboard`s bateria fiainana marina, ary ianao ho fahasambarana miaraka amin'ity vondrona amin'ny fotoana rehetra araka izay tsara anefa. Azonao atao ny mandeha amin'ny bateria scooter izay manana famantarana eo aminy ny mahita ny haavon'ny ny fahafahan'ny ny bateria. Jereo ny Ada ilain'ny seza misy kodiarana, fivezivezena SIDA, ary hafa Energy-nanosika fivezivezena Gadgets izay azonao vakiana eto. Noho izany hianatra ny 8.5inch Smart fahaiza-mandanjalanja Scooter Bluetooth hoverboard kodiarana lehibe K7 topy maso eto anatrehan'i miantsena ho azy. Ity misy lahatsary tombana mahafinaritra izay mamintina maro izany. On miaraka amin nanan-tarehy, dia manana rohy ianao amin'ny ho any amin'ny mpamatsy rehefa afaka ny mianatra ny topy maso no natambatra ary mampifandray Ho anao ny vondron'orinasa ao anatin'ny Etazonia
Tokony fotsiny ianao te-hampiasa ny scooter tsy manam-paharoa ho an'ny fialam-boly ny tena mahay mampifandanja hoverboard dia lehibe noho ampy. Koa, ny môtô no lalana rehetra, ary tokony mampiasa azy amin'ny fotaka, ny oram-panala, ny arabe sy ny fasika faritra. Tamin'ny voalohany, tena mahay mampifandanja hoverboard k7 dia lehibe 8.5inch kodia sy eny-lalana izay mety noho ny tora-pasika tsoavaly. Noho izany dia manana traikefa mitaingina tsara. Faharoa, 500W Motors, hery matanjaka. Fahatelo, rafitra lafiny roa motherboard, hanatsarana ny fahaiza ny famokarana sy Ankehitriny-varotra. Ankoatra izany, dia miankina amin'ny fomba manokana miseho patanty, tsy manam-paharoa kokoa. Na izany aza, ny asa tanana vondrona misolovava an-tanana miaraka amin'ny mpanao lalàna miaraka amin'ny tanjona ho ara-dalàna ny fampiasana. Tokony hividy iray? Noho izany, eo anatrehanao hividy hoverboard hahazoana antoka fa ny bateria dia arovana amim-pahombiazana, ary dia tonga noho ny faran'izay fitantanana sy mamaly ny tarika. Moa nandalo Ul2272 hambara?
Ny Powerboard amin'ny Hoverboard mety ho lafo vidy indrindra angamba no tena mahay mampifandanja môtô avy any sy ny fanontaniana ny olona rehetra raha ametrahantsika dia: "Moa vidiny ny zava-dehibe? Ny Koowheel tena mahay mampifandanja scooter vidiny dia tena mitombina .Raha ny marina, dia tsy ho Koowheel ambany kalitao ny vokatra ho an'ny mpanjifa fiarovana. Tena tsara raha misy fifantenana dia azo inoana fa ho tanora ankizy mitaingina azy io. Ny Self-mampifandanja ny Scooter K8 amin'ny KOOWHEEL Mety ho tena mora ampiasaina, ary mila fotsiny no matoky fa ianareo dia ho afaka mihazona hatrany zavatra kosa nitaingina solaitrabe izany. Toetoetra:
Hoverboard K8 natao tany Milan, fa am-boalohany EU tsena namboarina
Miafina tahony famolavolana, mora nitondra
Off dalana kodiarana famolavolana, mora azony ny salam-maso eo modely
Slim sy ny hazavana lanja
Inona no tombontsoa izany no?
Koowheel tsy ho ambany kalitao entana
Hoverboard K8 mbola ny Top toetra Standard
Ampiasao ihany ny Top mpamatsy ny PCB, Motor, Charger
Ny tena azo antoka 24V 6.5inch hoverboard
Battery mihaona fiarovana rehetra fitsipika
Lowest tsininy taha
Noho izany, io tena mahay mampifandanja scooter manana ny iray amin'ireo endri-javatra fiarovana tsara indrindra ho an'ny mpitaingina bisikileta. Ary ataovy tongotra iray eo amin'ny swegway. Ho an'ireo izay te zavatra mahomby sy vonona ny handoa ny manan-danja, dia izao no safidy tsara indrindra.
Post fotoana: Aug-29-2017